Salama, rehetra, misy vaovao tsara ho anay roa sy ianao, namolavola fomba roa vaovao postur corrector-smart posture corrector. Sary ho an'ny firesahana ho,
FAHASOAVANA: fanaraha-maso marina ny tena fotoana. Raha miondrika mihoatra ny 25 degre ny lamosinao, hanitsy ny fahatsoranao amin'ny alàlan'ny fanairana izy ireo mba hampahatezitra anao.
INGENIOUS DESIGN: volavola 8 misy endrika dia ergonomika. Izy io dia mifanentana amin'ny curve olombelona rehefa mitafy. Ny akora vita amin'ny paty avo lenta dia tena azo ampitaina, mahatonga anao hahatsiaro tena sy tsy hahatsiaro tena tsy mahazo aina ny tsindry amin'ny sorokao rehefa mitafy azy.
SORATRIA FAMPIASANA: Ampiasao mandritra ny 2 ora isan'andro mandritra ny 3 herinandro, ary azonao atao ny mahatsapa fiovana mazava. Ny hozatry ny lamosina dia ampiasaina amin'ny famoronana fahatsiarovana hozatra ary manova ny fahazaran-dratsy.
FAHAMARINANA: Manakarama mandritra ny 1 ora ary ampiasao mandritra ny 15 andro. Ny bateria mahazaka 500mA lehibe dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Izy io dia afaka manitsy tsy tapaka ny posture anao mandritra ny fotoana lava ary tsy mila fikojakojana fanampiny.
1. mitafy hoditra tsy hita maso, mahazo aina sy mifofofofo;
2. Fanaraha-maso postura omnidirectional, fahatsiarovana ny hozatra;
3. Ny hazavan'ny lamosina dia afaka mora foana ary ny olon-dehibe sy ny ankizy dia afaka mampiasa izany mora.
fotoana: miasa, mandalina, mandeha amin'ny alika, fitsangatsanganana, vakansy, sns.
1. Ampifanaraho amin'ny halavany mety ny haben'ny fampiasana azy.
2. Rehefa avy manaofy, manangana ny lamosina, atsangano ny tratra, ary avy eo mitazona ny kofehy mandritra ny 1 segondra ho lasa herin'ny fampahatsiahivana, hihoatra in-3 ny fampahatsiahivana;
3.Mampifanaraka ny fisavana mety tsara mandra-maheno ny feon'ireo fitaovana telo;
4. Amin'ny fotoana mitovy ， ny fampahatsiahivana dia mirakitra ny fahitanao tsara;
5.Raha manana ianao hihaona Radian mihoatra ny 25 degre ， ny fampahatsiahivana momba ny posture dia hamantatra azy ho azy avy eo ary avy eo ny famoahana ny vovoka mampahatsiahy;
6. Ny fampahatsiahivana ny posture dia mampahatsiahy anao ny fitazonana ny tratranao mahitsy sy ny fijerinao amin'ny fanamafisam-peo.
Habe: iray mifanentana daholo, Fitaovana: ABS + fehikibo mikaingo avo lenta.
Lanja: 85g, Function: fanitsiana ny hazondamosina, fanatsarana fihodinana, fiarovana ny fahitana, fahaiza-manao bateria: 500mAH / 3.7v, fiampangana fiampangana:
V8 USB interface tsara, olona azo ampiharina: ny ankizy / lehibe dia mifanaraka avokoa, ny famatsiana herinaratra: 5v, ny fanjifana herinaratra: 0.4w, fotoana fanamafisana: 2 ora eo ho eo, fitrandrahana herinaratra: 5v